मुर्दालाई आगोमा जलाए पनि, नङ्ग्याए पनि कहाँ विद्रोह गर्छ र !
हाम्रोखबर शुक्रबार​, फागुन १० २०७५
'जहाँ घाम पुग्दैन त्यो अँध्यारो ठाउँबाट केही कुरा निकाल्नका लागि चेतना चाहिन्छ । अँध्यारोमा पनि महसुस गर्ने भनेको चेतना कै कारण हो । यसरी चेतनाबाटै विद्रोह जन्मन्छ । विद्रोहबाटै नयाँ निक्र्योल, नयाँ सिर्जना जन्मन्छ । यसर्थमा विद्रोह भनेको एउटा विपरीत परिस्थितिसँगको संघर्ष हो । '
‘‘भाग्यमा उडेको सपना भेट्न
समयको प्रतीक्षा गर्न सकिन्छ, तर भरोसा रहन्न
फूल होस या काँडा अरूकोमा, आफू कहिल्यै धाउन्न
आँखै छेकिन्छ बरु बादलले, घामजून त कहिल्यै छेकिन्न ।’’
उसो त विद्रोही स्वभावकी उनी । हत्केलामा भावीले लेखिदिएको भाग्यरेखा नभेटेपछि उनलाई कर्मले भाग्यरेखा कोरूँ लाग्छ, नत्र छुरीले भए पनि भाग्यरेखा कोरेर रगताम्मे बाटो हिँडेरै आफ्नो कर्मलाई प्रमाणित गरूँ लाग्छ । त्यसैले उनका सिर्जनाहरूमा निरङ्कुशता, उत्पीडन, विभेदप्रतिको विद्रोह, साहसिकता, चुनौती, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान आदिले प्रतिनिधित्व नगर्ने कुरै भएन । भन्छिन्, ‘ सामान्य रूपमा विरोध बुझिने विद्रोह भनेको यथार्थतः विपरीत परिस्थितिसँगको संघर्ष हो । गहिराइमा डुबुल्की मारेर मोती निकाल्नुजस्तै हो ।’ मोमिला जोशी, अर्थात् साहित्यमा मोमिला । नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा उनको नाम नसुन्ने सायद कमै होलान् । शालीन कविता लेखनमा अत्यन्त लोकप्रिय रहेकी मोमिला निबन्धमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल प्रतिभा हुन् । प्रस्तुत छ– उनै मोमिलासँग हाम्रोखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं आफूले आफूलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ ?
बक्ररेखामा ठोक्किँदै, लहरिँदै, तरङ्गिदै, गुनगुनाउँदै अस्तित्वको खोजीमा हिँडेको एउटा सामान्य मान्छे, मोमिला । जीवनको यस रफ्तारमा कलालाई अस्तित्वको माध्यम मानिएको छ ।
अरूले पनि यही बुझे हुन्छ ?
हो ! अरूले पनि यही बुझिदिए हुन्छ या जे बुझे पनि छुट छ, अरूलाई !
उसो भए जीवन के हो ?
मान्छेको जीवन प्रकृतिको सर्वोत्कृष्ट उपहार हो । अस्तित्वको सन्दर्भमा भेटिनु–नभेटिनु, हुनु–नहुनुको दूरी र रीतमा नथाकेरै हिँडिरहेको छ भने त्यो जीवन हो । तर, होइन बाँच्नका लागि मात्र बाँचेको छ भने त्यो मरेसरह हो ।
तपाईंलाई यो क्षेत्रमा केले डोर्याएको हो ?
सायद, मभित्र सानैदेखि अस्तित्वको भोक लुकेको थियो । त्यो भोकले नै मलाई यतातिर डोर्याएको हुनुपर्छ । किनकि जन्मनु भनेकै मृत्युको मिसिलमा हस्ताक्षर गर्नु हो । यो त सांसारिक प्रक्रिया नै भयो । खान, बस्न, रमाउन, सन्तान उत्पादन सबै स्वभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ । तर सानैदेखि एक किसिमको मभित्र एउटा विशिष्ट चेतना रहेछ । सायद, त्यही चेतना चाहिँ अस्तित्वको भोेक हो भन्ने लाग्छ । यही कारणले गर्दा म सानैदेखि चित्रकला, संगीत, नृत्य, कविता सबै कुरामा मग्न हुन्थेँ ।
यही मात्र कारण हो र ?
मूलतः मेरो अस्तित्वकै भोक हो । लाग्छ, मेरो अस्तित्वको भोक सानैदेखि अत्यन्त संवेदनशील थियो । दाइलाई पढ भन्यो, मलाई किन पढ भनेन भनेर रुन्थेँ, म । मायाको तीव्र चाह उर्लियो भने आफूतिर ध्यानाकर्षण गर्नका लागि म कृत्रिम बिरामी भइदिन्थेँ । अर्को भनेको मवरिपरिको परिवेश पनि हो । मेरा बुवा अत्यन्तै प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो । त्यसले मलाई थप ऊर्जा दिएको हो । तर मुख्यतः कारणमा अस्तित्वको मेरो अन्तर्भोक नै हो भन्ने लाग्छ ।
तपाईँलाई विद्रोही स्वभावकी भन्छन् । यस्तो सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
मलाई एकदमै खुशी र सुन्दर लाग्छ । यस्तो सुन्दा म निकै पुलकित हुन्छु ।
किनकि जहाँ चेतना छ; त्यहीँ विद्रोह हुन्छ । यस्ता कुराहरूले मलाई बाँचेको आभास दिन्छ । मुर्दालाई आगोमा जलाए पनि, नङ्ग्याए पनि कहाँ विद्रोह गर्छ र !
यदि रिसले नै भनेको हो भने पनि, समाजमा नमिल्ने भन्न खोजेको हो भने पनि वास्तवमा सबै ठाउँमा घाम कहाँ पुग्छ र ! सबैले बुझेकै कुरा हो यो । जहाँ घाम पुग्दैन त्यो अँध्यारो ठाउँबाट केही कुरा निकाल्नका लागि चेतना चाहिन्छ । अँध्यारोमा पनि महसुस गर्ने भनेको चेतना कै कारण हो । यसरी चेतनाबाटै विद्रोह जन्मन्छ । विद्रोहबाटै नयाँ निक्र्योल, नयाँ सिर्जना जन्मन्छ । यसर्थमा विद्रोह भनेको एउटा विपरीत परिस्थितिसँगको संघर्ष हो । गहिराइमा डुबुल्की मारेर मोती निकाल्नुजस्तै हो । यसरी म पूmलभन्दा भूल मन पराउँछु किनकि भूलको बोधपश्चात् नै पूmलको जिन्दगी सुरक्षित रहन सक्छ । सायद, आशय बुभ्mनुभयो होला ! यसकारणले विद्रोही भनेर एउटा लेखकीय स्वभावलाई ससम्मान इङ्गित गरेको ठानेर म चाहिँ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु ।
किन प्रेम, महिला, विवाह, यौन लगायतका बिषयमा बढी कलम चलाउनुहुन्छ ?
तपार्इँले भनेका सबै संवेदनहरू जीवनबाट अलग छैनन् । वास्तवमा भन्ने हो भने म दार्शनिक कविता मन पराउँछु । र यस्तै हुन्छन् मेरा कविताहरू । तर महिला हुनुको अर्थमा कुनै न कुनै ठाउँमा त महिलाकै कविता आवश्यक पर्छ नै । फेरि त्यो मेरो सजातीय संवेदना भयो । यद्यपि मलाई साँच्चै मनपर्ने भनेको जुनसुकै विषयका दार्शनिक कविताहरू नै हुन् । यति भन्दा भन्दै पनि मान्छेले जे कुरा बढी सोच्छ; त्यही कुरा बढी भेट्छ । सम्भवतः तपाईं पनि जे कुरा खोजिरहनुभएको छ; सायद, त्यही भेटिरहनुभएको छ र त्यही भनिरहनुभएको छ ।
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा नयाँ अनुहार पनि प्रशस्त आएको देखिन्छ । कस्तो लाग्छ ती नयाँ अनुहारका सिर्जनाहरू हेर्दा, पढ्दा ?
कतिपय रहरले आउँछन् भने कतिपय कवि भएरै आउँछन् । कवि भएरै आएकाहरूको कवितै पारा छ भने केवल रहरले आउनेहरूको आफ्नो चुरीफुरी पारा छ; जो बोक्राको रवाफिलो रौनकमा रमाइरहेका छन् । बस् ! यस्तै नै हो ।
आजभोलि कविताप्रति अनुदार भएको हो समाज ?
समाज अनुदार त होइन, यसलाई हेपेको जस्तो लागेको मात्र हो । किनकि यथार्थतः कविता भनेकै थोरैमा धेरै कुरा बोलिने विधा हो । त्यसैले प्रायः मानिसहरूले आफ्नो लेखनलाई कविताबाट सुरुआात गर्छन् । यसर्थमा कवितालाई सस्तो मानिएको मात्र हो । वास्तवमा कविता अर्थात् काव्य भनेकै साहित्य हो । पछिमात्र हो, अरू जोडिएको । फेरि थोरैमा धेरै भनिने भएकाले अर्थात् मूलतः कविता सूत्रात्मक हुनु र यस्ता कविता गहन हुने भएकाले यस्ता कवितालाई बुभ्mन मान्छेले गहिराइमा डुबुल्की मार्नुपर्छ एकातिर भने अर्कातिर कथा भनेको सम्झन सजिलो हुन्छ । त्यसकारणले पनि कथातिर मान्छे यसै मोडिन्छन् । त्यसैले पनि अहिले कथाजस्तो कविता बढी लेखिन्छन् । यस्ता कथाजस्तो कविता सजिलै बुझ्छन् पनि । तर ‘लङ लास्टिङ’ र कविताधर्मको बढीभन्दा बढी निर्वाह भने सूत्रात्मक दार्शनिक कवितामै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि यसलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।
भनेपछि कविता अहिले हेपिएको अवस्थामा हो ?
हो, फेरि कहिलेकाहीँ सौन्दर्यशास्त्रमा पनि अर्थशास्त्रको नियम लागू हुँदोरहेछ अर्थात् माग र आपूर्तिको सिन्द्धान्त लागू हुन्छ । कविताको आपूर्ति बढी भएको हुनाले माग घट्न गई मूल्य घट्न पुगेको पनि हुन सक्छ ।
अब के गर्नुपर्ला त यसलाई माथि उठाउन ?
गुटबन्दी त्यागेर कविताको गुणवत्तालाई कायम राखौँ !
तपाईँलाई नेपाली साहित्यमा मनपर्ने कविता चाहिँ कुन कुन हुन् नि ?
मलाई भूपि शेरचन, परिजात र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका सबै त होइनन्, तर केही केही कविताहरू असाध्यै मनपर्छन् । अहिलेकामा अग्रज पुस्ताका वैरागी काइँला, सरुभक्त, अशेष मल्ल, दिनेश अधिकारी, श्यामल । त्यस्तै मेरो पुस्तामा विप्लव, श्रवण र पछिल्लो पुस्तामा भूपिन, सरस्वती प्रतीक्षा आदिका कविता राम्रो लाग्छ ।
तपाईको नयाँ कृति आउने कुरा के भयो ?
एउटा निबन्ध सङ्ग्रह प्रकाशनको तयारीमा थियो तर दुःखको कुरा सम्पादन गरी सकेको सामग्री कम्प्युटरबाट रिकभर हुन नसक्ने गरी सबै उड्यो । फागुनभित्र ल्याउने योजना थियो अब सम्भव भएन । तर हार्नेछैन, फेरि काम गर्नेछु । यो घटना हत्केलामा भाग्यरेखा नभएजस्तै हो, तर कर्मले भाग्यरेखा बनाउनेछु । हातलागे ठोक्कर नै सही, अस्तित्वको बक्ररेखा हिँड्न मलाई सहर्ष मन्जुर छ !